MyanCare | Hepatitis A viral infection ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ Aပိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
အသည်းရောင်အသားဝါဖြစ်စေတဲ့ virusပိုးတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ အဖြစ်အများဆုံး virusအုပ်စုအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Viral Hepatitis A,B,C,D နှင့် E တို့အကြောင်းလေး ပြောပြသွားပါမယ်။
သည်နေ့တော့ Hepatitis A virusလို့ခေါ်တဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါ Aပိုးအကြောင်း ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
Hepatitis A virus ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ Aပိုး ဘယ်လိုကူးစက်သလဲ ?
Hapatitis A virus ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါAပိုးသည် အူလမ်းကြောင်းကတဆင့်ကူးဆက်တဲ့ virus အမျိုးအစားဖြစ်တယ် ။
အခြားလူတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ကူးစက်နိုင်ခြေရှိလဲ ?
ဘာရောဂါလက္ခဏာမှမပြမှီ ၂ပတ် ၃ပတ်အလိုမှ ာကတည်းက အခြားသူများကို ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတာကို အထူးသတိပြုရပါမယ်။
Non-specific prodromal illnessလို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်ရောဂါဖြစ်နေလဲတိတိကျကျမပြောနိုင်သော လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ – ခေါင်းကိုက်ခြင်း , မစားချင်မသောက်ချင်ဖြစ်ခြင်း , ပျို့အန်ခြင်း , ဝမ်းလျှောခြင်း , ဗိုက်အောင့်ခြင်း , ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း , အရိုးအဆစ် ကြွက်သားတွေ နာခြင်း , ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း , ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း အစရှိတဲ့ လက္ခာတွေကို အသားမဝါခင် ရက်အနည်းငယ်ကနေ ၂ပတ်အတွင်း ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေအနေနဲ့တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။
Asymptomatic လို့ခေါ်တဲ့ ဘာရောဂါလက္ခဏာမှမပြတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Fulminant hepatitis ခေါ် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေနိုင်သော ရုတ်တရက်ပြင်းထန်အသည်းရောင်ခြင်းလဲ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပေမဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်လဲ ?
အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ ပိုမိုဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ် ။ ကလေးတွေမှာဖြစ်ရင်လဲ များသောအားဖြင့် ဘာလက္ခဏာမှ မပြတာများပါတယ် ။
လတ်တလောအသည်းရောင်အသားဝါAပိုးရှိကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
လတ်တလောအသည်းရောင်အသားဝါAပိုး ရှိမရှိကို သွေးထဲမှာရှိတဲ့ အသည်းအရောင်အသားဝါAပိုးကိုတိုက်ထုတ်တဲ့ကိုယ်ခံအား ခေါ် Anti-HepatitisA virus Antibody ( Ig M)ကို စစ်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ် … သည် IgMလေးက ရောဂါစဖြစ်ကတည်ကသွေးထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီး ရောဂါပျောက်ပြီး၃လလောက်မှ နည်းသွားပါတယ်။
အနားယူခြင်း , ရေများများသောက်ခြင်း , အရက်ရှောင်ခြင်း , အစားအသောက်ရှောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါAပိုးဟာ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း အသည်းရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့ ရုတ်တရက်အသည်းပျက်စီးခြင်းကို လူအယောက်၁၀၀၀မှာတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ် ။
Cholestasis ခေါ် အသည်းအင်ဇိုင်းဓာတ်တွေတက်ပြီး သည်းခြေရည်စီးဆင်းမှုနည်းသွားခြင်းတို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အသည်းရောင်အသားဝါ Aပိုးဟာ ဘယ်လိုလူတွေမှာ ပိုဆိုးတတ်လဲ ?
နာတာရှည်အသည်းရောဂါရှိတဲ့သူ , အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုး , Cပိုး ရှိတဲ့သူနဲ့ HIVရောဂါသည်တွေမှာဆို ပိုမိုပြင်းထန်စွာခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အစားအစာများကို မစားသုံးမှီ မကိုင်တွယ်မှီ လက်ကိုဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ ။
အစားအစာများကို သေချာစွာ ကျက်အောင်ချက်ပြုတ်ပါ ။
ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုပါ အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်းလက်ကိုဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါ ။
ရောကိုကျိုချက်၍ သောက်ပါ။ အသည်းရောင်အသားဝါAပိုးဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာ အသည်းရောင်အသားဝါAပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပါ ။
အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုး သို့မဟုတ် Cပိုးရှိတဲ့သူတွေကို အသည်းရောင်အသားဝါAပိုးမဖြစ်အောင် အသည်းရောင်အသားဝါAပိုးကာကွယ်ဆေး ကြိုထိုးထားပါ။
In Child Health၊Mental Health